Ibhizinisi lakho le-Online Vs. Abancintiswano abasha - 3 Amathiphu Awesome From Semalt
Ukuvula isitolo se-intanethi kuwumsebenzi oqondile. Ukuvula isitolo sangempela kungabainselelo enzima. Ibandakanya izinqubo ezifana nokugcinwa kwezinto zokugcina, ukuyala izinto zokuthenga amashalofu nokukhokhela isikhala sokubuyisela - ideal lux plafoniere. Nokho,lokhu akuyona indaba ye-intanethi ye-e-commerce. Noma ubani onolwazi olusisekelo angasetha ukuqala futhi enze imali engenayoinsiza enkulu ye-intanethi.
Ngalolu lwazi engqondweni, kucacile ukuthi noma yikuphi ukuqala noma ibhizinisi eliphakathiukuthi kakade ikhona ingabhekana nokuncintisana okunzima kusuka ekuqalisweni okusha kwe-intanethi. Abaningi balaba baphangi abasha batshayela kakhulu kwi-SEO futhi bakhokhelwa izikhangisothola isabelo semakethe ku-niche ngayinye.
Ibhizinisi le-E-commerce elinomsebenzi wesikhathi eside lingaqhudelana nalolu daba,ngokulandela amathiphu ahlinzekwa nguNic Chaykovskiy, iMenenja Ephezulu Yempumelelo Yakhasimende Semalt .
1. Sebenzisa izindlela Zokuthengisa Zokudala.
Izindlela zokuthengisa zendabuko zifaka ukukhangisa kwe-banner, izikhangiso ze-PPC, kanye nomkhiqizoukubeka ezitolo eziphumelele ezifana ne-Amazon ne-eBay. Noma kunjalo, amabhizinisi amakhulu asebenzisa izindlela zokudala ezifana nokudluliswa okukhokhelwayo. Ngokwesibonelo,inkampani ingafaka i-gig, lapho imema ikhasimende ukuthi iqhaza khona. Kule nxaxheba, ikhasimende lingakwazi ukukhethaenye enye isaphulelo. Ukudluliselwa okunjalo kuholela ekuthengiseni okungaphezulu kunezikhangiso zePCC ezikhokhelwayo.
Amasu wokumaketha okuqukethwe njengamavidiyo wokufundisa ukukhuthaza amakhasimende akhona..Ukumaketha kwemidiya yezenhlalo kanye ne-imeyili elandelayo ukwabelana okunikwe amandla Ukuhlanganyela kuhle ku-SEO kanye nokuthola amaklayenti aqondile. Ezimweni eziningi, abantuwabelane ngokuqukethwe kubantu ababa amakhasimende kweso sikhathi.
2. Nikeza Isevisi Yamakhasimende E-Stellar.
Ukunikeza isevisi yamakhasimende ekhonti eliphezulu hhayi ngqo kumncintiswano omusha. Njengomthengisioye waba sebhizinisi isikhathi eside, lena yindawo lapho isipiliyoni sakho sisebenza khona. Ngokwesibonelo, umuntu unethuba lokunikeza amaklayentiisipiliyoni sekhasimende elihlukile. Kwezinye izimo, ungacela iklayenti ukuthi ithande kuma-social media noma ubuyekeze ku-Google. I-Stellaramakhasimende angakha ukuqwashisa kubalandeli babo futhi athole ezinye izivakashi ezintsha.
3. Nikeza okunikezwayo okuhlukile.
Ezimweni eziningi, amakhasimende aya emncintiswaneni omusha amaklayenti akho amadala. SEOkuhilela ukwabelana ngevolumu yokusesha engadonseli kubaseshi abengeziwe. Ngenxa yalokho, udinga isu lokubuyisela isisekelo sakho samakhasimende endala.Ukumaketha kwe-imeyili esondelene kungaba isu elihle. Umuntu angase aqale ngokubonga amakhasimende wangaphambili futhi ahlinzeke ngemali ngamanani aphansi.Kwezinye izimo, faka isipho samahhala sento ayithenga. Uma usubuyisela emuva amaklayenti akho, ungabuyela kumasu omaketha amadala.
Abanomabhizinisi abaningi, abenza ibhizinisi e-intanethi, babhekane nokuncintisana okunzimakusukela ekuqaleni. Abantu abazama ukukhangisa nge-intanethi amasu we-SEO amathoni futhi uma umncintiswano omusha obonakalayo ekhombisa indawo yesehlakalo,kukhona ukwehla kwezimoto ezaza kuwebhusayithi yakho. Lesi simo senza yonke inqubo ye-SEO ifinyelele phansi njengomncintiswanoinesilinganiso kwimiphumela ye-SERP, ukuthola isabelo se-traffic yakho. Noma kunjalo, umuntu angabuyela ibhizinisi ngokujwayelekile, ngakho-ke ukuncintisana kungakwazisusa. Ngamasu angenhla, ungabuyisa amaklayenti akho futhi uphinde uphinde uthole isikhundla sakho esiphakeme.